उर्लियो नारायणी: ईतिहासकै ठुलो बाढी, यस्तो आयो रिपोर्ट – Dailny NpNews
उर्लियो नारायणी: ईतिहासकै ठुलो बाढी, यस्तो आयो रिपोर्ट
प्रकाशित मिति: बुधबार, आषाढ ०२, २०७८ समय: ९:०९:४८
चितवन : नारायणी नदी इतिहासमै ठूलो भएको छ । नदीले खतराको विन्दु पार गरेर धेरै माथि पुगेको हो । साँझ ९ बजे नदीको सतह १०.१ मिटर पुगेको छ । गत वर्ष साउन ६ गते बिहान नारायणीको सतह ९.९१ मिटर पुगेको थियो । जुन विगत ४४ वर्ष यताकै बढी थियो । यसअघि सन् १९७४ अगष्ट ५ मा १० दशमलव १ मिटर पानीको तह पुगेको नारायणी बेसिन फिल्ड कार्यालय भरतपुरले जनाएको छ ।
जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रका अनुसार आज दिउँसो ४ बजेबाट पानीको वहाव बढ्दै गएको हो । केन्द्रका आनुसार नरायणी नदीमा पानीको बाहव ८ मिटरभन्दा माथि गएमा खतराको विन्दु पार गरेको मानिन्छ । नदीमा पानीको वहाब वढेसँगै आज साँझ जिल्ला आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रको टोलीले प्रभावित क्षेत्रको अनुगमन गरेको छ । टोलीमा भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेनु दाहाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमलाल लामिछाने, सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुले अनुगमन गर्नु भएको छ । नदी बस्तिमा पस्न सक्ने क्षेत्रको अध्ययन समेत गरिएको छ ।
नारायणी नदीसँगै राप्ती, रिउ खोलामा पानीको वहाब वढ्दै गएकाले नदी तटीय क्षेत्रमा वसोवास गर्ने जनतालाई सुक्षित स्थानमा गई बस्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवनले आग्रह गरेको छ । कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत खेमराज पौडेलद्वारा जारी सूचनामा पानीको वहाब बढेको यो समयमा दाउरा टिप्न, माछा मार्न भन्दै नदीमा नपस्न अनुरोध गरिएको छ ।
यस्तै औषधि, खाद्यन्न, महत्वपूर्ण कागजहरु झोलामा तयारी अवस्थामा राख्न पनि नदी तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनतालाई आग्रह गरिएको छ । नारायणी नदीका कारण भरतपुर महानगरपालिका वडा नं. १६, २६, २७ र २८ र राप्ती नदीले वडा नम्बर २२ र २३ मा बढी असर पार्र्ने गरेको छ । त्यस क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ । महानगरका वडा नं. २६ र २७ को हिरापुर, सिसई, न्यूरेनि लगायतका ठाउँमा नारायणी नदीले तटबन्ध पार गरी मानव वस्तीतर्फ छिर्न शुरु गरेको छ ।